भारतले गोर्खा भर्ती खोल्यो, बोल्ने को ?
भारतले गोर्खा भर्ती खोलेर छनौट प्रकृया अघि बढाएको छ । गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ भनेर चिच्याउनेहरुले किन जिब्रो तालुमा टाँसेर बसेका होलान् ?
भारत र चीनवीच तनाव बढ्दै गएको छ । युद्धको स्थिति छ । गलवान घाँटीमा ४ हजार गोर्खा सैनिक खटाइसकेको खबर आएको छ । अरु खटाइदैछन् । युद्धको माहोल, गोर्खा सैनिकलाई नेपालको छिमेकीसँग लडाउने साजिस, यसैवीच थप गोर्खा सैनिक भर्ती खोलिनु, नेपालका देशभक्त, चिन्तकहरुले केही बोलिरहेका छैनन् । नेकपा र कांग्रेस त नबोल्ने नै भए ।
भारतीय सेनाले एयरमेनको ग्रुप एक्स, ग्रुप वाइ र ग्रुप वाइ नन टेक्निकल ट्रेडमा गुजरात, कर्नाटका, ओडिशा, बिहार, हरियाणा र राजस्थानमा भर्ती खोलेपछि र अविवाहित भारतीय र नेपाली नागरिक योग्य हुने योग्यता तोकिएपछि ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरु आकर्षित भएका छन् । यो भर्तीको संख्या कति हो, स्पष्ट छैन, जति पनि भर्ती लिने र तालिम दिएर चीन, पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध मोर्चामा खटाइने निश्चित छ । १० दिनसम्म ती केन्द्रमा भर्ती लिने भनिएपछि हजारौंको संख्यामा सैनिक भर्ती लिन खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जनयुद्धकालमा र पछिल्लो केही समयदेखि गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । जब भारतले भर्ती खोल्यो, ती आवाजहरु बन्द भएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको औचित्य नरहेको बताएका थिए । पार्टी स्तरमा चीनसँग लड्न गोर्खालाई नखटाउने आवाज पनि उठेको थियो । भारतले किन भर्ती नगर्ने ? प्रश्न गरेपछि सबै मौन छन् ।